ယောလ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / ယောလ
1:13 ယဇ်ပုရောဟိတ်, ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်ငိုကြွေးစည်း. ယဇ်ပလ္လင်၏ဝန်ကြီးများ, ညည်းတွားမြည်တမ်း. Enter, ငါ၏ဘုရားသခဝန်ကြီးတွေ, လျှော်တေအဝတ်၌မုသား. ယဇျပူဇျောနှင့်ရေစက်သွန်းသောသူသည်သင်၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ထဲကရှေ့သှားကွပွီ.
1:14 အစာရှောင်သန့်ရှင်းစေခြင်း, စည်းဝေးပွဲကိုပဌနာ, သင်တို့၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့အကြီးအကဲမျ​​ားနှင့်ထိုပြည်ကိုမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်. ထိုအခါထာဝရအရှင်အော်ဟစ်:
1:15 "Ah က, ah, ah, ထိုနေ့က!"သခင်၏နေ့ရက်သည်ရောက်လုနီးပြီ, ထိုသို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးနှင့်တူပျက်စီးမှုများ, အင်အားကြီး်ရှေ့တော်၌.
1:18 Why have the animals groaned, the herds of cattle bellowed? because there is no pasture for them. ဟုတ်ကဲ့, and even the flocks of sheep have been lost.
1:19 သင့်ဆီ, အိုထာဝရဘုရား, ငါအော်ဟစ်ပါလိမ့်မယ်, because fire has devoured the beauty of the wilderness, and the flame has burned all the trees of the countryside.
1:20 ဟုတ်ကဲ့, and even the beasts of the field have gazed up at you, like the dry ground thirsting for rain, because the fountains of waters have dried up, and fire has devoured the beauty of the wilderness.
2:1 ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာတံပိုးကိုမှုတ်, ငါ၏သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာညည်းတွားမြည်တမ်း, ပွညျသူပွညျသားအပေါငျးတို့သမြို့သားတို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းကြကုန်အံ့. သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်ယင်း၏သွားရာလမ်းပေါ်တွင်; ဒါကြောင့်အနီးရှိဖြစ်ဘို့:
2:2 မှောင်မိုက်နှင့်မှောင်တဲ့နေ့က, တိမ်နှင့်လေဘွေရာနေ့. နံနက်အချိန်၌ကဲ့သို့တောင်ပေါ်ကျော်ရောက်ရှိဖို့, သူတို့တစ်တွေမြောက်မြားစွာနှင့်ခိုင်ခံ့သောလူဖြစ်ကြ၏. သူတို့လိုအဘယ်အရာကိုမျှအစအဦးကတည်းကတည်ရှိလာခဲ့သည်, မဟုတ်သလိုသူတို့နောက်တည်ရှိလိမ့်မည်, ပင်ဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့မျိုးဆက်နှစ်ပေါင်းအတွက်.
2:8 And each one will not hem in his brother; every one will walk in his own rough path. ထို့အပြင်, they will drop through the breach and not be harmed.
2:12 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, the Lord says: “Be converted to me with your whole heart, in fasting and weeping and mourning.”
2:15 ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာတံပိုးကိုမှုတ်, sanctifyafast, စည်းဝေးပွဲကိုပဌနာ.
2:17 Between the vestibule and the altar, ယဇ်ပုရောဟိတ်, the ministers of the Lord, will weep, သူတို့ကပြောပါလိမ့်မယ်: “Spare, အိုထာဝရဘုရား, spare your people. And do not bequeath your inheritance into disgrace, so that the nations would rule over them. Why should they say among the peoples, ‘Where is their God?"'
2:19 ထိုအခါထာဝရအရှင်တုံ့ပြန်, and he said to his people: "အကယ်, I will send you grain and wine and oil, and you will again be filled with them. And I will no longer give you disgrace among the Gentiles.
2:21 Earth, မကြောက်ပါနဲ့. Exult and rejoice. For the Lord has great esteem for what he has done.
2:22 Animals of the countryside, မကြောက်ပါနဲ့. For the beauty of the wilderness has sprung forth. For the tree has borne its fruit. The fig tree and the vine have bestowed their virtue.
2:23 ပြီးတော့သင်, sons of Zion, exult and rejoice in the Lord your God. For he has given youateacher of justice, and he will make the early and the late rains descend to you, just as it was in the beginning.
2:27 And you will know that I am in the midst of Israel, and I am the Lord your God, နှင့်မှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိ, and my people will not be confounded forever.
2:28 ထိုနော, it will happen that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy; your elders will dream dreams, and your youths will see visions.
2:29 ထို့အပြင်, in those days I will pour out my spirit upon my servants and handmaids.
2:32 And it will happen that everyone who will call upon the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion, ယေရုရှလင်မြို့၌, and in the remnant whom the Lord will call, there will be salvation, just as the Lord has said.
3:1 အကြောင်းမူကား,, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ထိုကာလအတွက်, ငါယုဒအမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောကူးပြောင်းခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်အခါ,
3:2 ငါသည်ခပ်သိမ်းသောတပါးအမျိုးသားတို့သည်စုဝေးစေမည်, ယောရှဖတ်ချိုင့်သို့သူတို့ကိုဦးဆောင်မည်. ထိုအရပ်၌ငါ၏လူကျော်သူတို့နှင့်အတူအငြင်းပွားလိမ့်မည်, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး, ငါ၏အမွေကို, သူတို့လူအမျိုးမျိုးတို့တွင်ကွဲပြားစေ, ငါ့ပြည်ကိုဝေဖန်လျက်နေကြသည်ပြီ.
3:3 သူတို့သည်လည်းငါ၏လူကျော်စာရေးတံချကြပြီ; နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသူတို့တန်ဆာထဲတွင်နေရာရပြီ, ထိုသူတို့စပျစ်ရည်ကိုရောင်းမိန်းကလေး, ဒါကြောင့်သူတို့သောက်ရအံ့သောငှါ.
3:4 အမှန်ဆိုသည်ကား,, သငျသညျအကြှနျုပျအကြားရှိကားအဘယ်သို့, တုရုမြို့နှင့်ဇိဒုန်မြို့နှင့်ဖိလိတ္တိလူအပေါငျးတို့သဝေးကွာသောအရပ်တို့ကို? သင်ဘယ်လိုအကြှနျုပျကိုအမျက်တော်ပြေခြင်းအယူလိမ့်မည်? ထိုအခါသင်တို့သည်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်လက်စားချေကိုယ်ကိုကိုယ်မှဖြစ်လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးပြန်ဆပ်မကယ်မလွှတ်မယ်လို့, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မကြာမီ, သင့်ရဲ့ခေါငျးပျေါ.
3:5 သငျသညျအကြှနျုပျ၏ရွှေငွေသိမ်းသွားပြီ. အကြှနျုပျ၏နှစျလိုဖှယျဆုံးနဲ့လှပတဲ့, သင်သည်သင်၏ကွန်းသို့ယူကြပြီ.
3:6 ပြီးတော့သင်, sons of Judah and sons of Jerusalem, you have sold the sons of the Greeks, so that you might drive them far from their own territory.
3:7 အကယ်, I will raise them up from the place into which you have sold them, and I will turn back your retribution on your own head.
3:8 And I will sell your sons and your daughters into the hands of the sons of Judah, and they will sell them to the Sabeans,adistant nation, သခင်ဘုရား၏အမိန့်တော်ရှိ၏များအတွက်.
3:9 Proclaim this among the Gentiles: “Sanctifyawar, raise up the strong. ချဉ်းကပ်နည်း, ascend, all men of war.
3:11 ထွက်ချိုးကြိုတင်မဲ, ကမ္ဘာ၏ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးတကာ, နှင့်အတူစုဝေး. ထိုမြို့၌ထာဝရဘုရားသည်သင်၏ရဲတိုက်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုအသေခံတွေ့ဆုံရန်စေမည်။ "
3:12 သူတို့ကိုပျေါပေါကျကွပါစို့ယောရှဖတ်ချိုင့်သို့တက်. ထိုအရပ်၌ငါထိုင်မည်, ကမ္ဘာ၏လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသကဲ့သို့.
3:13 ရိတ်ဘွား Send, စပါးရိတ်ရာကာလရင့်ကျက်ပြီ. ကြိုတင်မဲနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်, စာနယ်ဇင်းအဘို့အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်, ကိုနှိပ်အခန်းတစ်ခန်းလျှံနေသည်. မိမိတို့အငြိုးအဘို့တိုးမြှင့်ထားပြီး.
3:14 နိုင်ငံများအသင်း, အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်း၏ချိုင့်၌တပါးအမျိုးသားတို့: သခင်ဘုရား၏နေ့ဆီလျြောစှာအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်း၏ချိုင့်၌နေရာအရပ်ယူသည်.
3:15 နေရောင်နှင့်လသည်မိုက်လိမ့်မည်ပါပြီ, နှင့်ကြယ်တို့သည်ဘုန်းအသရေရှိသည်ဟုဆုတ်ခွာ.
3:16 ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကကြွေးကြော်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့မှသူ၏အသံကိုလွှင့်လိမ့်မည်ဟု. မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတပြင်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်. ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့အမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၏သားအစွမ်းသတ္တိဖြစ်လိမ့်မည်.
3:17 တဖန်သင်တို့ကိုငါသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်, ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာကျိန်းဝပ်အပေါ်, ငါ၏သန့်ရှင်းသောတောင်တပြင်. ယေရုရှလင်မြို့အဘို့သန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်ဟု, တပါးအမျိုးသားတို့သည်နောက်တဖန်အားဖြတ်ကူးမည်မဟုတ်.
3:18 ထိုသို့ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်, ထိုကာလ၌, တောင်ကြီးတို့ချိုယိုလိမ့်မည်, နှင့်နို့ရည်သည်ကုန်းနှင့်အတူစီးဆင်းလိမ့်မည်. နောက်တဖန်ရေသည်ယုဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့မြစ်ကိုကူးကြလိမ့်မည်. ထိုအခါစမ်းထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ထဲကထွက်သွားလိမ့်မည်, ထိုသို့ဆူးပင်သဲကန္တာရရေလိမ့်မည်.
3:19 အဲဂုတ္တုပြည်၌လူဆိတ်ညံလျက်ရှိရလိမ့်မည်, ဧဒုံတောကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မတရားယုဒအမြိုးသားတို့အဖို့အဘယ်သို့ပြုသည်၏, မိမိတို့အပြည်၌အပြစ်မရှိသောသွန်းသောကြောင့်.
3:20 နှင့်ယုဒပြည်အစဉ်အမြဲစည်ပင်ကြလိမ့်မည်, ယေရုရှလင်မြို့အဘို့မျိုးဆက်ဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့.
3:21 ထိုအခါငါသူတို့၏အသွေးကင်းစင်စေမည်, ငါသန့်ရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်ခဲ့. ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာကျန်ရှိနေလိမ့်မည်.